Indlu engaselwandle enechibi labucala kunye neClubhouse kufutshane neDisney - I-Airbnb
Indlu engaselwandle enechibi labucala kunye neClubhouse kufutshane neDisney
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguJader
Wamkelekile kwiDolophu yethu ehonjiswe kakuhle enevenkile ezi-2 kuphela kumgama oziikhilomitha ezi-4 ukusuka kwiiPaki zeDisney kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane. Uya kuba nayo yonke indlu yakho kunye nosapho lwakho ngelixa ukonwabele iholide yakho eFlorida. Siye safuna ukuxhobisa ikhaya lethu ukuba libe kumgangatho ophezulu kwaye silindele iimfuno zakho zokuhlala okutofotofo. Sikholelwa ngokwenene ukuba ikhaya lethu likhethekileyo ngokusekelwe kwizizathu ezi-4 eziphambili: Indawo, uKhuseleko, uMhlobiso kunye neNtuthuzelo.
Wamkelekile kwiDolophu yethu ehonjiswe kakuhle enevenkile ezi-2 kuphela kumgama oziikhilomitha ezi-4 ukusuka kwiiPaki zeDisney kunye nezinye izinto ezininzi ezinomtsalane. Uya kuba nayo yonke indlu yakho kunye nosapho lwakho ngelixa ukonwabele iholide yakho eFlorida. Siye safuna ukuxhobisa ikhaya lethu ukuba libe kumgangatho ophezulu kwaye silindele iimfuno zakho zokuhlala okutofotofo. Sikholelwa ngokwenene ukuba ikh…
“Ifakwe kwindawo enesango elineClubhouse kunye nephuli yabucala. IDisney isemnyango wethu.”
- Jader, umbuki zindwendwe wakho
I-Cable TV, Ifeni esesilingini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-Queen bed, I-Smart TV, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhedi/ikhothi yomntwana esongwayo xa useluhambeni, I-Cable TV, Ifeni esesilingini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, I-Smart TV, I-TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi waphantsi, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhedi elala umntu omnye, I-Cable TV, Ifeni esesilingini, Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-Smart TV, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhafu enamanzi ashushu esetyenziswa nangabanye
4.82 (iingxelo zokuhlola 122)
Ikhaya likwindawo enamasango, iWindsor Palms, inokhuseleko lweyure ezingama-24, i-concierge kunye neClubhouse.
Indawo yaseKissimmee iye yatshintshwa ngokupheleleyo kwaye yahlaziywa kule minyaka idlulileyo.
Nokuba uyaphumla kwindawo ekufutshane yangaphandle okanye ujonge iipaki zemixholo, awusoze uphelelwe zizinto oza kuzenza okanye zokuzibona. Indlela enkulu, i-US192 ibonelela ngeentlobo ngeentlobo zebhari kunye nobomi basebusuku. Zininzi iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela.
Umgama ukusuka eOrlando International Airport
imizuzu eyi-30 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Jader
Izimvo eziyi-1 360